Glass Jar Factory - Mpanamboatra Jar Glass China, Mpamatsy
Ny voninkazo lotus dia maneho fandriampahalemana, fahadiovana ary fahazavana.
Ny Crystal Lotus Flowers dia mpamatsy angovo tena tsara.
Apetraho eo akaikin'ny varavarankely ao an-tranonao io kristaly io mba hahitana ny tara-masoandro mivantana mamirapiratra eny amin'ny rindrina rehetra. Ny kristaly dia handrava ny tara-masoandro ary hamorona haingon-trano tsara tarehy ao an-tranonao
Tsara ho an'ny fotoana rehetra na filàna haingo, Tena tsara ampiasaina amin'ny efitrano fandriana, trano, ho fanomezana, bara, kafe, trano fisakafoanana, mariazy, fety ary toerana romantika hafa.
Loko 7 Crystal Glass Lotus Flower Candle Tea Light Holder Buddhist Candlestick
Siny fitaratra 500ml ho an'ny sakafo
Mitahiry hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe
Amin'ny lafiny iray amin'ny spectrum antsika dia azonao atao ny mankafy ny vavam-bavantsika mahazatra, kilasika amerikanina izay nanala ny hetahetan'ny sakafom-bahiny. Saingy misy fampiasana maoderina ho an'ity siny be habeny malaza ity, ao anatin'izany ny mix cookie misy sosona, ny kanto fasika ary ny fikosehana an-trano. Mifanohitra amin'ilay siny kely, mipetraka ilay vava lehibe sy malalaka Ball Mason Jar izay mety indrindra amin'ny fitehirizana ny ranom-boankazo na paoma, ary koa ny fampiasana hafa isan-karazany toy ny fitehirizana birao na zavakanto ary kojakoja amin'ny asa-tanana
Siny roa misy vavahady roa samy hafa
Ny siny vava mahazatra dia nopetahany takelaka ary manolotra fanokafana kely kokoa eo an-tampony, raha ny siny feno vava kosa manome fanokafana lehibe kokoa eo an-tampony. Misy tombony tsy manam-paharoa amin'ny karazana fanokafana tsirairay, ary afaka manapa-kevitra ianao amin'ny fotoana sy ny fomba hampiasana ny karazany tsirairay amin'ny fomba izay hahasoa anao sy handraisanao izay ilainao.
Tavoara mason 50ml
GRADE FOOD: Ny siny masona tsirairay dia vita amin'ny akora ara-tsakafo, tsara amin'ny fitehirizana sakafo. Vatana fitaratra maharitra, rakotra volafotsy no fitaovana voaporofo fa tsy azo soloina ny Lab ary nihoatra ny fenitry ny fiarovana ny FDA.
TANDRITRA MAHASOA: Hamarino tsara ny tombo-kase misy kalitao isaky ny sarony. Tsara sy azo ampiharina, avelao ny lakozianareo feno fahatsapana literatiora sy zavakanto vaovao, fahatsapana Retro, hitazona ny vaovao ho lava kokoa!
VERSATILE & MULTIPURPOSE: Mety amin'ny Jam, jelly, sakafon-jaza, fanasoavana amin'ny mariazy, zava-manitra, tantely na fanomezana an-trano. Tena tsara ho an'ny zava-manitra, anana, pie sns, mety tsara amin'ny lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, fandroana ary amin'ny fotoana rehetra!
DISHWARE SAFE: Ny lozisialy amin'ny lozisialy dia mahatonga azy ireo ho mora diovina, na azonao atao ny manasa azy ireo amin'ny rano sy savony, maimaim-poana!
Tavoahangy mason-tsakafo 500ml
Ity vokatra ity dia vita amin'ny akora fitaratra milay amin'ny tontolo iainana, izay tsara tarehy, mateza, mahazaka akanjo ary manana androm-piainana maharitra.
Milamina sy boribory ny vavan'ny tavoahangy, ary nohosorana namboarina ny vavan'ilay tavoahangy. Milamina sy milamina ary boribory izy ary matanjaka sy matevina ny vovo-tavoahangy. Miorina sy milamina izy io.
Ny lokon'ny vazy dia ny lokon'ny vera tany am-boalohany, izay notsofin-tanana ary tsy nisy fandokoana taorian'ny fitsaboana!
Tavoara mason 500ml misy mololo
Kaopy mason 600 ml
Sakafo ara-tontolo iainana 450ml mason-tsakafo
Tavoahangy mason-tsakafo 200ml
Mora ny manokatra sarom-bilany: sarom-bilany haingana sy mora ampiasaina ireo fitoeran-javatra
Sheer, Jereo amin'ny alàlan'ny sarony: Mora ny mamantatra ny atiny nefa tsy mila manokatra tsirairay
Vatana vaky: vatan'ny vaky vovoka izay tsy maharitra
Stackable: Azonao atao ny manangona ireo kaontenera amin'ny iray hafa, canister fitehirizana habakabaka, manampy anao handamina ny lakoziananao
Ity rivotra tery ity dia afaka amin'ny BPA (Bisphenol A), izay miteraka loza ara-pahasalamana rehefa mifandray amin'ny sakafo sy ranon-javatra, hiantohana fomba fiaina salama kokoa amin'ny fampiasana vokatra Bisphenol A maimaimpoana.